စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းနဲ့ ဥရောပအစားအစာတွေသုံးဆောင်နိုင်စေဖို့…….. – FoodiesNavi
By yin sandi On January 17, 2018 0
မွေးနေ့ပွဲလေးကို ???? အမှတ်တရလေးတွေနဲ့အတူ ဖန်တီးပြုလုပ်မလား ?? VIP ဧည့်သည်တွေကို ??????‍? အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်ဧည့်ခံကျွေးမွေးချင်လား ?? ချစ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ?‍♀️? စကားစမြည်ပြောရင်း အစားအသောက်တွေသုံးဆောင်မလား ?? ချစ်သူနဲ့အတူ ?‍❤️‍??‍❤️‍?‍? စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ညစာလေးကို အတူတူသုံးဆောင်ချင်လား ?? ?????? ဒါတွေအားလုံးအဆင်ပြေစေမယ့် နေရာလေးတစ်ခုကို Foodies Navi ကနေမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ? ဒီဆိုင်လေးကတော့ (၃၆)လမ်း ၊ (၇၈)လမ်းနှင့်(၇၉)လမ်းကြား ၊ ရထားသံလမ်းအနီး မန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိနေတဲ့ Station 36 Cafe ဆိုတဲ့ European Restaurant လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ?????
Station 36 Cafe ဟာ၂၀၁၇ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကမှ စတင်ဖွင့်လှစ်ထားတာဆိုပေမယ့် နာမည်ရနေပြီးလူပြောများနေတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ??? ဥရောပစတိုင်အစားအစာတွေကို အဓိကရောင်းချတာဖြစ်ပြီး ရရှိနိုင်တဲ့ Menu တွေကတော့– ?????☕️? Open Baget Sandwich(Salmon) ၊ Burger(Chicken or Beef) ၊ Roasted Turkey with Cream Cheese Sauce ၊ Spanish Chicken Wings ၊ Deep Fried Corn-Beef ၊ Station Turkey Fruit ၊ Pizza ၊ Deep Fried Cripsy Pork-Rib ၊3layers Turkey Sandwich ၊ Grilled Pork Neck Salad စတဲ့ဥရောပစတိုင်ဟင်းလျာတွေကို အရသာရှိရှိအမယ်စုံလင်စွာနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??????? လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ သားငါးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့် Foodies တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေပြီး ခံတွင်းတွေ့စေမှာ အသေအချာပါပဲနော်။ ???
အရသာကိုမမြည်းစမ်းရသေးခင် ??? စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ??? ဆိုင်ရဲ့ Decoration ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တင် Foodies တို့ကြွေသွားမှာပါ။ ??? သီချင်းသံငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းလေးကို ?????? နားဆင်ခံစားရင်း Wifi Free လည်း ???အသုံးပြုနိုင်သေးတာဆိုတော့ wooo စွန်းမိုက်မှာအသေအချာပါပဲနော်။ ?? ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲလာလာ ၊ ??? ကားနဲ့ပဲလာလာ ကျယ်ဝန်းတဲ့ကားပါကင်လည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ စွန်းဖိုင်းတယ်နော်။ ??? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰⏰⏰ မနက်(၁၁)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိ ⏱⏱⏱ နော်။
Image Source: www.facebook.com/station36cafe
In Restaurant Guides Tagged burgers and sandwiches, European Foods, pasta Leaveacomment
စားနေကျအစားအစာတွေကိုမှ ဆန်းသစ်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ သုံးဆောင်နိုင်စေဖို့……………